Dowlada Belarus oo xiratay Xuduudaheeda - Idman news
Dowlada Belarus oo xiratay Xuduudaheeda
Xukuumada Lukashenko ayaa xirtay xuduudaheeda galbeed iyadoo sheegtay inay ka horgateygso farogelinta uga imaaneysa dalalka reer Galbeedka.
Xuduuda Belarus la wadaagto dalalka Poland iyo Lithuania ayaa gebi ahaan la xiray, wuxuuna Madaxweynaha Belarus Lukashenko heegan sare geliyey ciidamadiisa.
Tilaabadan ayaa imaaneysa xili 6dii asbuuc ee lasoo dhaafay ay shacabka wadanka Belarus ay wadeen mudaharaad looga soo horjeedo Madaxweyne Lukashenko oo dalkaasi kasoo talinayey 26kii sano ee lasoo dhaafay.
Doorashadii Belarus ka dhacday bishii Agoosto ayaa keentay banaanbaxyo ay shacabka dhigayaan kuna diidan yihiin xukuumada Lukashenko oo caburin ku heysa dadka rayidka ah oo doonaya inay helaan xoriyad lamid ah tan ay heystaan shacabka dalalka kale ee reer Yurub.
Lukashenko oo isagu kamid ahaa hogaamiyayaasha faro-ku-tiriska ah ee kasoo haray Dowladii Sofiyeetka ayaa aaminsan in banaanbaxyada dalkiisa ka socda laga soo abaabulay wadamada reer Galbeedka, wuxuuna taageero dhaqaale iyo militari ka helayaa hogaamiyaha Ruushka, Vladimir Putin.
Previous China oo dhoolatus militari ka bilowday badda Taiwan
Next Dareen la’aanta Urta oo calaamad u ah difaaca jirka ee Korona Fayras
DAAWO:-Rooble oo canaantay Guddiyada Doorashada
R/W Rooble oo amar siiyey gudiyada doorashada kadib kulankii Midowga Musharaxiinta
Barnaamijka Galab Wanagsan (29-11-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Mid ka mid ah beelaha deegaan doorashadoodu tahay Galmudug oo ka digay in la boo…
Mudada uu garoomada ka maqnaanayo Neymar Jr kaddib dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray oo shaaca laga qaaday – Gool FM
‘Matrix Resurrections’ contest: Join Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss at Canadian premiere November 29, 2021
Mid ka mid ah beelaha deegaan doorashadoodu tahay Galmudug oo ka digay in la boo… November 29, 2021
Omicron strain of coronavirus that causes COVID now in at least a dozen countries, as experts urge unvaccinated to get shots November 29, 2021
Mudada uu garoomada ka maqnaanayo Neymar Jr kaddib dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray oo shaaca laga qaaday – Gool FM November 29, 2021
DAAWO:-Rooble oo canaantay Guddiyada Doorashada November 29, 2021